(L) လေ့လာမှုအသစ်အရပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများအားစိတ်ကျရောဂါသက်သာစေသည့် Striatal Dopamine Synthesis (2013) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ
လျှော့ချ Striatal Dopamine Synthesis (2013) မှအသစ်စက်စက်ရောဂါပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများအတွက် (L) ကိုနယူးလေ့လာမှု Links များစီးပွားပျက်ကပ်
by သတင်းထုတ်ပြန်ချက် •
ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2013
ထဲမှာ Published တွေ့ရှိချက် ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ဂျာနယ်
အဆိုပါပါကင်ဆန်ရောဂါဖောင်ဒေးရှင်းမှအဆိုအရ 60 မှတက်ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) နဲ့တဦးချင်းစီ၏% မကြာခဏ underdiagnosed ဖြစ်သောစိတ်ကျရောဂါ, အလယ်အလတ်မှအပျော့စားပြ။ ဒါဟာ debilitating ရောဂါရှိခြင်းသို့မဟုတ်အနေဖြင့်စိတ်ကျရောဂါရလဒ်များကို PD pathophysiology ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဦးနှောက်အတွက်အပြိုင်ပုံမှန်မဟုတ်သောပြောင်းလဲမှုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
တဦးတည်းအယူအဆ PD အတွက်စိတ်ကျရောဂါချို့ယွင်း striatal dopamine function ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆနျ့ကငျြရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ သေး PD ဆေးဝါးများတာမဟုတ်အသစ်ရောဂါဝေဒနာရှင်များ၏ဦးနှောက်စကင်ဖတ်ဖို့အသုံးပြုပုံဖင်လန်စုံစမ်းစစ်ဆေးစိတ်ကျရောဂါအဆင့်ပြောင်းပြန်ဟာ striatum အတွက် dopamine synthesize နိုင်စွမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပြသကြပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာကျန်ရစ် striatum တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်များ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပြဿနာအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည် ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏ဂျာနယ်။
ပါကင်ဖွင့်လူနာအတွက်စိတ်ကျရောဂါအသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများတားဆီးများနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူသူတို့အားအစောပိုင်းကစိတ်ဓာတ်ကျမဟုတ်သောသူတို့၏ထက်မော်တာလက္ခဏာတွေများအတွက်ဆေးဝါးများစတင်လေ့နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါကုသအသက်တာ၏အရည်အသွေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ဦးစလုံးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော dopamine agonists အဖြစ်ဆေးဝါးများ PD လူနာလက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
လက်ရှိအစီရင်ခံစာခုနှစ်တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင်အသုံးပြု 18PD လူနာနှစ်ဦးကိုကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများကိုကြည့်ဖို့ fluorodopa ပေ Scan ဖတ်။ တဦးတည်းအုပ်စုတစ်စု 15 ပါဝင်သည် က de Novo လူနာအသစ် PD ရောဂါနှင့်သူတို့ထိုကဲ့သို့သော levodopa အဖြစ် PD ဆေးဝါးများနဲ့ကုသခဲ့ဖူးကြောင်းခဲ့ကြသည်အဓိပ္ပာယ်လူနာ။ ဒီအုပ်စုပျမ်းမျှ PD ရောဂါကြာချိန်ထက်နည်း5နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလိုလူနာနှစ်ဦးကိုလက်တွေ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူရောဂါခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ unmedicated PD အုပ်စုတစ်စုမှာစာရေးဆရာသိသာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်စပ်မှုကို (Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI) ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်) နှင့်ဘယ်ဘက် striatum အတွက် dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည် (FDOPA လွှာမှဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်) (putamen p = 0.002, caudate တွေ့ရှိခဲ့ p = 0.042) ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆက်စပ်ညာဘက် striatum အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ မော်တာလက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုမဟုတ်သလိုဘက်ကိုလည်းမတွေ့ရှိချက်ထိခိုက်ခဲ့သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုပြီးသား PD ဆေးဝါးများနဲ့ကုသခံရသူအလယ်အလတ်ရောဂါပြင်းထန်မှုနှင့်အတူ 20 လူနာတစ်ဦးအုပ်စုတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအလူနာတွေအတွက်ရောဂါ၏ပျှမ်းမျှကြာချိန် 5.6 နှစ်ပေါင်းခဲ့ 90% ဟာ Mao-B က inhibitor levodopa, 90% ဟာ dopamine agonist နှင့် 60% ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသည်။ ဆယ်ပါးရာခိုင်နှုန်းကလက္ခဏာပေါ်လည်းဖြစ်ကြသည်။ ဒီအုပ်စုထဲမှာမရှိသိသိသာသာဆက်စပ် BDI ရမှတ်များနှင့် caudate သို့မဟုတ် putamen အတွက်ဒေသဆိုင်ရာ FDOPA လွှာမှအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သုံးပြီးစိတ်ကျရောဂါနှင့် striatal dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်မှာရှာဖွေနေ "ယခင်လေ့လာမှုများ 18Ffluorodopa ပေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိလူနာ '' ရောဂါပြင်းထန်မှုနှင့်ဆေးဝါးသမိုင်းထဲမှာမှတ်သားသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောထင်ဟပ်ကိုက်ညီမှုရလဒ်များ, "ဖြစ်တဲ့တူရ်ကူမြို့မှာတက္ကသိုလ်ဆေးရုံနှင့်ဖင်လန်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူရ်ကူမြို့မှာတက္ကသိုလ်မှာလက်တွေ့ neuroscience ၏ဌာနခွဲခဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Juho Joutsa, MD ကပြောပါတယ်။ "ဒီရလဒ်တွေကိုအစောပိုင်းအဆင့် unmedicated လူနာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်လူနာထားတဲ့စိတ်ဓါတ်များနှင့် dopamine အကြား link တစ်ခု, ညွှန်ပြဘတ်ရပါမည်။ "
အဆိုပါလေ့လာမှုကို အသုံးပြု. ပထမဦးဆုံးခဲ့ 18စိတ်ကျရောဂါကိုသာလက်ဝဲဘက်အပေါ်လျှော့ dopamine ပေါင်းစပ်စွမ်းရည်နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွဖို့ fluorodopa ပေ scanning နည်းပညာ။ သို့သော်ဒေါက်တာ Joutsa dopamine Transporter ligands အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်၏အလားတူအကြာတွင်အစီရင်ခံခဲ့ကြကြောင်းမှတ်ချက်ပေး။
PD ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တစ်သန်းအမေရိကန်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းငါးခုလူဦးရေသန်းထိခိုက်, United States မှာဒုတိယအသုံးအများဆုံး neurodegenerative ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ပျံ့နှံ့ 2030 အားဖြင့်နှစ်ဆ projected ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအထင်ရှားဆုံးလက္ခဏာတွေလှုပ်ရှားမှု-related, ထိုကဲ့သို့သောအတင်းအဓမ္မလှုပ်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားတောင့်တင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်အိပ်စက်ခြင်းနှောင့်အယှက်ပိုမိုဆိုးရွားလာအဖြစ် non-မော်တာလက္ခဏာတွေ, ကြိုတင်မော်တာလက္ခဏာတွေစတင်ခြင်းမှပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။